News Collection: रेखालाई किस गर्दा एलर्जी
रेखालाई किस गर्दा एलर्जी
नेपाली चलचित्र जगतमा चर्चित नायिका रेखा थापाको कहिले काही अति नै नौटङ्की सुन्नमा आउछन् । बारम्बार अनेक काण्ड गरेर चर्चामा आइरहन्छिन उनी । यसपटकको प्रसङ्ग भने रेखालाई एलर्जी भएको हो । उनलाई कहिले नायकसँग काम गर्दा एलर्जी हुन्छ त कहिले कसैले गालामा किस गरिदिंदा एलर्जी ! केहि दिन अगाडी नायिका रेखाको गालामा नवनायक सबिन श्रेष्ठले किस गरे । सबिनले किस मात्र के गरेका थिए रेखालाई खपि नसक्नु भएछ ।
प्रसङ्ग हो रेखाकै होम प्रोडक्सनको चलचित्र 'रावण' को छायाँकनको । चलचित्रको एक दृश्यमा नायक सबिनले रेखाको गालामा किस गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि जबर्जस्ती । निर्देशक कमलकृष्ण पौडेलले एक्सन मात्र के भनेका थिए सबिनले आफ्नो ओठ रेखाको गालामा जोडी हाले । सुटिङका क्रममा पहिलो पटक कुनै नायकले गालामा किस गरेपछि रेखाको प्रतिक्रिया बुझ्न गार्‍हो भएन । उनी एकैछिनमा रातो निलो भईन् । उनको गाला पनि निकै रातो भएर आयो ।
चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेकी यि नायिका गालामा किस गर्दा किन रातोपिरो भईन् त भन्ने हाम्रो जिज्ञासा मेट्न रेखा स्वयंले सहयोग गरिन् । उनले भनिन्, 'करिब १०० चलचित्रको दौरानमा अहिले सम्म मेरो गालामा कसैले किस गरेको थिएन तर आज सबिनले किस गर्दा मलाई निकै गार्‍हो भयो । किस गर्ने बित्तिकै ऐना हेर्दा त एलर्जी नै भएछ ।' गालामा किस गर्दा एलर्जी हुने रेखाको ओठमा किस गर्दा के होला ? यो प्रश्नको उत्तर रेखाले दिन सकिनन् । उनी लजाईन् मात्र ।
पछिल्लो समयमा चलचित्रमा किस दिनले व्यापकता पाएको छ । अझ टङ किस र लिप किस त निर्देशकहरूले राख्न पाए चलचित्र नै हिट हुने धारणा राख्छन् । सायद यहि सोचेर हो या के हो निर्देशक कमलकृष्णले पनि रेखा र सबिनको लिप किस राख्ने योजनामा थिए तर रेखाले स्विकार गरिनन् । उनले भनिन्, 'लिप किसको ठाउँमा गालामा नै किस गर्दा हुन्छ भन्ने लागेर नै मैले अस्विकार गरेकी हुँ ।'
यता रेखासँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्न पाएका नवनायक सबिन श्रेष्ठलाई भने किस गर्दा कुनै गार्‍हो अप्ठ्यारो भएनछ ।